Maxey tahay Sababta ka danbeysa dilkii loo gaystay David Amess? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxey tahay Sababta ka danbeysa dilkii loo gaystay David Amess?
Faah faahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dilka David Amess oo ka dhacay Magaalada Essex ee bariga Caasimada Britian xili uu halkaasi ka waday ololihiisa doorasho.
LONDON - Xubno ka tirsan Qoyska wiilka Soomaaliga ah ee falkan ku eedeysan ayaa arintaasi ku sababeynaya in ay salka ku heyso xiriir dhanka siyaasadda ah oo ka dhaxeeyey Xildhibaanka la dilay iyo dowladda Qatar.
Cabdi Cali oo ah adeerka wiilka lagu tuhmayo dilka, ayaa Wargeyska Daily Mail u sheegay in waxa qura ee ay aaminsan yihiin ay tahay in David loo beegsaday xiriirka uu la lahaa dowladda Qatar, taasoo galaan-gal siyaasadeed ku leh arimaha Soomaaliya.
Adeerka eedeysane Cali Xarbi Cali ayaa sheegay in wiilkooda uu ka mid ahaa dadka u dhuun daloola arimaha siyaasadda cakiran ee soomaaliya, isagoo si joogta ah uga warqabay doorka siyaasadeed ee ay Qatar ku leedahay Xaalada Soomaaliya.
Cabdi Cali ayaa sidoo kale Wargeyska Daily Mail u sheegay in eedeysanaha aysan ku koobneyn arintaasi, balse badi Soomaalida ku nool qurbaha ay si aad ah u gorfeeyaan faragalinta ay dowlada Qatar ku heyso siyaasadda Soomaaliya, taasoo uu xusay in ay carro ku beertay, isla markaana ku riixday inuu dilkaasi fuliyo.
Eedeysanaha Adeerkii ayaa niyad jab ka muujiyey xaaladda uu wiilkoodu wajahayo, isagoo xusay in ay aad uga naxeen warkii dhiillada xanbaarsanaa ee ku wajahnaa dilka uu gaystay inankooda.
Ka hor inta uusan gaysan dilka lagu eedeeyey ee uu midida u adeegsaday, Cali Xarbi Cali ayaa ka soo safray Waqooyinka London oo uu ku noolaa, isagoo yimid Southend si uu falkaasi u fuliyo, waxana adeerkii Cabdi uu tilmaamay in aysan jirin cid ehelkooda ka mid ah oo halkaasi deggan, isla markaana uusanba fileyn in xitaa mar qura ay booqasho ama safar gaaban ku tageen xubno qoyskooda ka tirsan.
Aabaha Dhalay wiilka la tuhunsan yahay oo lagu magacaabo Xarbi Cali Kulane la taliyana mar u soo noqday mid ka mid ah Ra'iisu Wasaarayaashii dalka soo maray, ayaa Bishii aynu ka soo gudubnay, waxuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in siyaasadda Qatar ee Soomaaliya aysan aheyn mid wanaagsan, loona baahan yahay in gabi ahaanba dalka Soomaaliya laga saaro si aysan u sii daba dheeraan faragalintooda.
Hayeeshe, waxaa jirin caddeymo waafi ah oo muujinaya in Xarbi Kulane uu wax xiiir ah la leeyahay Kooxaha ka dirira gudaha iyo dibadda dalka Soomaaliya, sida lagu daabacay Wargeyska Daily Mail.
Labo cisho ka hor inta aan la dilin ayuu David Amess ka soo laabtay dalka Qatar, waxana geeridiisa kadib bayaan ka soo baxay Dowladda Qatar ay ku amaantay xiriirkii wanaagsanaa ee uu la lahaa iyo sida uu uga shaqeyn jiray xoojinka cilaaqaadka Qatar iyo Britian, iyadoo Amiirka dalkaasina uu ka tacsiiyey geeridiisa.
Booliska Ingiriiska ayaa weli gacanta ku haya eedeysane Cali, waxaana Saraakiishu sheegeen in tuhmanaha ay sii heyn doonaan ilaa sanadka cusub, si ay u dhameystiraan baaritaanada ku aaddan dilka David.